အကြောင်းအရာကူးယူခြင်းအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 8, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်ုပ်၏မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ငါဖြစ်၏ ရှေ့နေမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရှေ့နေမဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤရာထူးကိုထင်မြင်ချက်အဖြစ်ရေးသားပါမည်။ LinkedIn တွင်တစ် ဦး စကားလက်ဆုံ အောက်ပါမေးခွန်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည် -
ဆောင်းပါးများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင် (အမှန်စင်စစ်အမှန်တကယ်ရေးသားသူအားဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိပေးသော) သတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်တင်ခြင်းသည်တရားဝင်ပါသလား။ သို့မဟုတ်စာရေးသူနှင့် ဦး စွာစကားပြောသင့်သလား။
အဲဒီမှာတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့အဖြေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစကားများတဲ့လူထုရဲ့တုန့်ပြန်မှုကြောင့်လုံးဝသေကြေပျက်စီးခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ လူအများစုကအကြံဥာဏ်များကိုလက်ခံကြသည်၊ ဥပဒေရေးရာ သူတို့ဘလော့ဂ်မှာသတင်းအချက်အလက်ရှာတွေ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေ (သို့) အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပို့ဖို့။ ဆောင်းပါးများကိုပြန်လည်တင်မည်လား အကြောင်းအရာလား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ? မင်းအခွံမာသီးလား
တရား ၀ င်ငြင်းခုံမှုသည်မျှတစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မည်သို့အကြောင်းအရာတစ်ခုသည်အခြားဆိုက်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိပါကမူပိုင်ခွင့်ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အားမည်မျှအကာအကွယ်ပေးသည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ အကြောင်းအရာများစွာကိုရေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ငါမှားသည်ဟုသင်လုံးဝပြောနိုင်သည်။ ငါကတရားမဝင်ဘူးဟုမဆိုခဲ့ပါ ... ငါကပြောခဲ့သည် မှားသော.
မယုံနိုင်လောက်အောင် ပုံမှန် ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာသည် visitors ည့်သည်များမှတစ်ရက်လျှင်အကြိမ် ၁၀၀ ကျော်ကူးယူထားသည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်အားပေးသည်။ တစ်နေ့လျှင်အဆ ၁၀၀ !!! ထိုအကြောင်းအရာများကိုအီးမေးလ်ဖြင့်မကြာခဏဖြန့်ဝေသည်။ သို့သော်အချို့သည်အခြားသူများ၏ဆိုဒ်များသို့ပို့သည်။ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာအချို့သည်ကုဒ်နမူနာများဖြစ်သည် - ဖြစ်နိုင်သည်မှာ web စီမံကိန်းများဖြစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တင်သလား။ ဟုတ်ကဲ့ ... သို့သော်အမြဲတမ်းခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သို့မဟုတ်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်လစီကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငါမပြောခဲ့တာကိုသတိပြုပါ ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု။ သင်တင်လိုက်သောအကြောင်းအရာများအပေါ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုလွှင့်ပစ်ခြင်းသည်ခွင့်ပြုချက်မဟုတ်ပါ၊ ခွင့်ပြုချက်ကိုသင့်အားအတိအလင်းပေးရပါမည်။ ငါမကြာခဏစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲပေါ်မှာငါ့ကိုချရှိသည် ... အစားအပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသားခြင်း၏ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ဖို့ထက်ငါသူတို့ကဒီ post သို့လုပ်ချင်ပါတယ်ပျေါလှငျအဘို့အသူတို့ကိုငါမေးလေ့ရှိသည်။ သူတို့က ... သူတို့ကိုထုတ်ဝေရန်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူသူတို့ကိုပေး။
မူပိုင်ခွင့်အပြင်, ငါ Creative Commons အသုံးချခြင်း၏ဘက်မှာမှားယွင်းလေ့ရှိပါတယ်။ Creative Commons များ site ပေါ်တွင်ရှိသောအလုပ်သည် attribution ကို attribution မပါဘဲ၊ ၎င်းကိုထပ်မံခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်ရှိမရှိဖော်ပြသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းသည်အကြောင်းအရာထုတ်ဝေသူဖြစ်လာသည့်ခေတ်တွင်၊ အခြားသူတစ် ဦး ၏အကြောင်းအရာနှင့်အတူပို့စ်တစ်ခုကိုကူးယူကူးယူရန်သွေးဆောင်မှုသည်အားကြီးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်တစ်နေ့တာအတွက်ပိုမိုအန္တရာယ်များလာသည် (စွန့်စားမှုများသောဘလော့ဂါများအားမေးပါ) ညာဘက်) ။ တရားစွဲဆိုမှုများသည်တရားမ ၀ င်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေသင့်အားတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ခုံရုံးသို့ဆွဲခေါ်သွားခြင်းနှင့်သင့်အားကာကွယ်ရန်ရှေ့နေအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းသည်အချိန်ကုန်ပြီးစျေးကြီးသည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာကိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရှောင်ပါ။ ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောအရာမျှသာမဟုတ်ဘဲလုပ်ဆောင်ရန်လည်းကောင်းသောအရာလည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို (ကုမ္ပဏီများစွာကဲ့သို့) ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှအကြောင်းအရာများကိုရုပ်သိမ်းပြီးတင်ပြခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တစ်ခါတစ်ရံဝင်ငွေများကိုပင်ဆွဲဆောင်ခြင်းသည်လွယ်ကူသည်။
image ကို: Bart Simpson Chalkboard ပုံများ - ရုပျပုံမြား
Google Panda ရဲ့ Black Eye
ဇွန်လ9ရက် 2011 ခုနှစ် နံနက်4နာရီ 45 မိနစ်
တရားဥပဒေနဲ့အညီ မှားသလား မှားသလား။ ၎င်းသည် မှားယွင်းနေပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် နယ်စပ်မျဉ်းသည် တရားမဝင်ပါ။ 10 မှ 20% သည် ခရက်ဒစ် + လင့်ခ်ဖြင့် အဆင်ပြေသည်ဟု အချို့နေရာများကို ဖတ်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းသည် အကြောင်းအရာပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။ သရော်စာ၊ “ပုံတူကူးတူများ” နှင့် အခြားအရာများ သည် အနည်းငယ် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။
ဒါပေမယ့် အားလုံးကို "ပြန်တင်ခြင်း" ဒါမှမဟုတ် ကြီးမားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို လွှင့်တင်နေမှသာ ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်လို့ ပြောရပါမယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ စာတစ်ပုဒ်ရေးနေပြီး မင်းကို ကိုးကားချင်တာဆိုရင်၊ Douglas Karr ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ ပို့စ်သည် စကားလုံး 600 မှ 1200 ပါ... သင်၏ ပို့စ်များထဲမှ တစ်ခုမှ ကိုးကားချက်ကို အသုံးပြုလိုပြီး ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ ကိုးကားချက် ပေးဆောင်ပါမည်။
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ အွန်လိုင်းမှာ တင်လိုက်တာနဲ့ အခု မင်းက “အများပြည်သူ” ဖြစ်သွားပြီး ငါကိုးကားတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီကနေ ခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဆိုရင် တစ်ခုခုကို ပို့စ်တင်တာက မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် – တချို့လူတွေက ရက်တွေ၊ ရက်သတ္တပတ်တွေ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်တော့မှ ပြန်မတုံ့ပြန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် စကားလုံးအရေအတွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကို မှတ်သားထားပါ… ကိုးကားချက်တစ်ခုဟာ 1 စာကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…2အများဆုံးဖြစ်တာကြောင့် ဝါကျ 1 မှ 100 အတွင်းမှာ 200 ဝါကျဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့... ငါက ရှေ့နေမဟုတ်သလို ဘာမှလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒါက ငါ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ပဲ။
ဇွန်လ9ရက် 2011 ခုနှစ် နံနက် 10 နာရီ 12 မိနစ်
OPC (အခြားသူများ၏အကြောင်းအရာ) ကို mashup ပြုလုပ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သည်မဟုတ်ပါ။ ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာ သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပေးသော အယူအဆဖြစ်သည်။ စကားလုံးတွေတင်မကဘူး။ မဟုတ်ဘူး…
ဇွန် 9, 2011 မှာ 2: 29 pm တွင်
ကျွန်တော်သဘောတူသည်။ အထူးသဖြင့် mashup ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဆောင်းပါးသည် အများအားဖြင့် mashup များဖြစ်သောအခါ၊
ဇွန် 12, 2011 မှာ 10: 32 pm တွင်
ကောက်နှုတ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ ဆောင်းပါးအသစ်အတွက် အခြေခံအဖြစ် စိတ်ဝင်စားဖွယ် သို့မဟုတ် လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသော ဘလော့ဂ်တစ်ခုမှ စာပိုဒ်တစ်ခုကို မကြာခဏ ဆွဲထုတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်အမြဲတမ်း back links နဲ့ credit ပါပါတယ်။
ဇွန် 13, 2011 မှာ 7: 16 pm တွင်
Lorraine က သူတို့အပေါ် ဘယ်လိုခံစားရလဲ မဟုတ်ပါဘူး... ဆိုက်ပိုင်ရှင်က ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ ကောက်နှုတ်ချက်များသည် အကြောင်းအရာကို ကူးယူဆဲဖြစ်သည် - ပစ္စည်းသည် မည်မျှသေးငယ်သည်က အရေးမကြီးပါ။ တခြားသူတွေကို ပညာပေးတာမျိုး လုပ်တယ်ဆိုရင် ကောက်နုတ်ချက်က 'တရားမျှတတဲ့အသုံး' လို့ ထောက်ခံသူတွေက ပြောကြလိမ့်မယ်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်သော ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသည် ထိုကောက်နုတ်ချက်များမှ အကျိုးအမြတ်များရရှိနေပါသည်။ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောရင်တောင်မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တရားစွဲလို့ရတယ်။
ဇွန် 13, 2011 မှာ 8: 14 pm တွင်
ကောက်နုတ်ချက်တစ်ခုသည် အမြဲတမ်း တရားမျှတစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ပြဿနာမှာ လူတို့သည် တရားမျှတသော အသုံးချမှု၏ သဘောတရားတစ်ခုလုံးကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး အလွဲသုံးစားလုပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကောက်နုတ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာနဲ့ အဲဒါကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ဒီနေရာမှာ တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာပါ။
တရားမျှတသောအသုံးပြုမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားပြီး တရားမျှတသောအသုံးပြုမှုဆိုသည်ကို သင်ဖတ်ရန်သာလိုအပ်သည်။ ဤနေရာတွင် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ရှင်းပြထားပါသည်။ http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
ဆိုက်ပိုင်ရှင်အတွက် ကောက်နုတ်ချက်တစ်ခု ထုတ်ပေးရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ ရှိပြီး စာရေးသူက ဥပမာအားဖြင့် ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ feed မှတစ်ဆင့် ပေးဆောင်ပါက၊ ၎င်းသည် *ကောက်နုတ်ချက်* ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် “ရွေးချယ်ရန်နှင့် ရွေးချယ်ရန်” ဘလော့ဂါများအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မသက်ဆိုင်ကြောင်း နားလည်ပါသည်။ ဘယ်စာပိုဒ်ကို ကောက်နုတ်ချက်အနေနဲ့ သုံးချင်လဲ။
ကောက်နုတ်ချက်တစ်ခုကို မသတ်မှတ်ထားပါက၊ သင်၏အရေးအသားနှင့် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြရန်နှင့် လင့်ခ်တစ်ခုပေးရန် ဆောင်းပါးမှကိုးကားချက်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အဆင်ပြေသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သင့်ဆောင်းပါးသည် မူရင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကိုးကားချက်/ကောက်နုတ်ချက်သည် အမှတ်တစ်ခုဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးကို ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ၎င်းသည် ဆောင်းပါး၏ သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် အမှန်တကယ် ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းစွာ ပြန်ဆိုခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် အယ်ဒီတာ့အာဘော်၊ ဝေဖန်မှု၊ သရော်စာ နှင့် အကြိုက်များထဲသို့ ကျသင့်ပါသည်။
မူရင်းဆောင်းပါးမှအသုံးပြုသည့် စကားလုံးအရေအတွက်နှင့် သင်ရေးသားနေသည့် စကားဝိုင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာအတွက် အမှန်တကယ်တန်ဖိုးကို သင်အမှန်တကယ်ထည့်နေသည်မှာ မည်မျှရှိသနည်း။ ဒါမှမဟုတ် သူများပြောထားတာကို ပြန်သုံးနေတာလား၊ မင်းတန်ဖိုးမထည့်ရင် မင်းဘာလုပ်နေလဲ ငါမေးမယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် သင်သည် သင်၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ထောက်ခံရန် တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဆောင်းပါးကို ကိုးကားခြင်းဖြစ်ပါက ၎င်းကို ကြည့်ပါ။ မူရင်းဆောင်းပါးကို ပိုမိုထိတွေ့နိုင်စေရန်သာ ရည်ရွယ်ပြီး ဘလော့ဂါသည် ၎င်းတို့၏ အရေးအသားများတွင် ငွေရှာရန် မေးခွန်းထုတ်နေပါက၊ ယင်းကသာ အထောက်အကူဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
ဇွန် 13, 2011 မှာ 8: 28 pm တွင်
မင်းဟာ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်၊ အော်စကာကို စိန်ခေါ်နေပြီး ငါ့ရဲ့ထောက်ခံမှုကို ပေးနေတယ်။ ပြဿနာ၏သော့ချက်မှာ “တရားမျှတသောအသုံးပြုမှု” အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ကို သက်သေပြရန်၊ စကားလုံးအရေအတွက်သည် ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ (ကြည့်ပါ- http://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/IP၎) တရားစွဲရင်… တရားရုံးကို သွားတော့ အဲဒီမှာပဲ ဆုံးဖြတ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မင်းက အချိန်အများကြီးကုန်ပြီး ပိုက်ဆံလည်းကုန်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါ ငါ့ရဲ့သတိပေးစကားပါ – ဘလော့ဂါတွေ သတိထားရမယ်။
ဇွန် 15, 2011 မှာ 12: 35 pm တွင်
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူအနေဖြင့်၊ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူဘလော့ဂ်များတွင်လည်း ဤနည်းကို မကြာခဏတွေ့မြင်ပါသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများသည် Microsoft Developer Network (MSDN) ကဲ့သို့သော ဆိုက်တစ်ခုမှ ကုဒ်များကို ၎င်းတို့၏ ပို့စ်တွင် ပေါင်းထည့်ကာ အရင်းအမြစ်မှ ထွက်လာသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုးကားရန် ပျက်ကွက်ပြီး ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ကဲ့သို့ ကုဒ်ကို မှတ်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မူရင်းအလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြတ်သားစွာ မဖော်ပြထားသော်လည်း ယင်းအလုပ်ကိုလည်း ကိုးကား၍မရပါ။ ၎င်းသည် မူရင်းအလုပ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သင့်အား အထင်ကြီးစေသည်။
ဤအကြောင်းအရာအားလုံးသည် အခြားအလုပ်နှင့် ခိုးကူးမှုတို့ကို ကိုးကားခြင်းအကြောင်း အထက်တန်းကျောင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သင်ယူခဲ့ရသည့် သို့မဟုတ် သင်ယူသင့်သည့်အရာများဆီသို့ အမှန်တကယ် ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါသည်။ လူများစွာအတွက် အန္တရာယ်မရှိဟု ထင်ရသော်လည်း ၎င်းသည် သိက္ခာမဲ့ပါသည်။ ပိုစတာသည် အကြောင်းအရာကို ပြန်လည်တင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်ကို ကိုးကားရန် တာဝန်ရှိသေးသည်။
သြဂုတ်လ 29 ရက် 2011 ခုနှစ် 7:45 နာရီ
သင့်ဆောင်းပါးကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်ပါ ပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မူပိုင်ခွင့်ရထားသောအကြောင်းအရာကို တင်ခြင်း/ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အများစုမှာ အပြစ်ရှိသည်ဟု ထင်ပါတယ်။
BTW၊ Bart Simpson ၏ ဂရပ်ဖစ်ကို တင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့သလားဟု တွေးနေမိသည်။
သြဂုတ်လ 29 ရက် 2011 ခုနှစ် 9:23 နာရီ
ဟုတ်ကဲ့၊ အောက်ခြေမှာ ဂရပ်ဖစ်ကို ကိုးကားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် – ဆောင်းပါးမှာ ကိုးကားချက်တစ်ခုရှိသရွေ့ သူတို့ရဲ့ site ကိုပြန်သွားပါ။ 🙂
31:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 09
ဤအရာနှင့်ပတ်သက်သည့် အပ်ဒိတ်တစ်ခု - Righthaven သည် မကြာမီ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားပုံပေါ်သည်။ မကောင်းသတင်းနှင့် တရားရုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းမှုတို့က ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
31:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 4, 57
အကြောင်းအရာသည် အခြားဘလော့ဂ်မှ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုပေါ်သို့ ကူးယူမိပါက သိလိုပါသည်။ . . ထို့နောက် ဘလော့ဂါသည် စိတ်ဆိုးလာပြီး အကြောင်းအရာကို ဖယ်ရှားရန် တောင်းဆိုသည်။ . . ထို့နောက် အကြောင်းအရာကို ချက်ချင်းဖယ်ရှားပြီး တောင်းပန်စာ ပေးပို့ခဲ့သည်။ . . သို့ဆိုလျှင် ဘလော့ဂါသည် စွဲချက်တင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းဆီက ပြန်ကြားဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
31:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 35
ဟုတ်တယ်၊ Kelsey။ အကြောင်းအရာကို ခိုးယူခြင်းသည် ခိုးယူခြင်းဖြစ်ပြီး သင်ဖမ်းမိပြီးနောက် တောင်းပန်ခြင်းသည် အမှန်တရားကို ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒါက - သူတို့ဖယ်ပြီးရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ တရားမ၀င်လိုက်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ မလိုက်ဘူး။